मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाः वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ४.९ % ले वृद्धि - Arthasansar
शुक्रबार, १९ मंसिर २०७७, १५ : ४९ मा प्रकाशित
अर्थ संसार, काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्बजनिक गरेको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ४.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४०२७ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप परिचालन ३.० प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको थियो । त्यस अबधिमारु. ३३३१ अर्ब ५७ करोड निक्षेप पुगेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पहिलो तीन महिनामा बैक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जा ४.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३३३९ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४.३ प्रतिशतले बढेर रु. २९८८ अर्ब ७६ करोड पुगेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीे २०७७ असार मसान्तमा रु. ३५२ अर्ब ३७ करोड रहेकोमा २०७७ असोजमा रु. ३५२ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । त्यसैगरी, यस अवधिमा पुँजीकोष रु. ५२१ अर्ब ७० करोडबाट वृद्धि भई रु. ५८४ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ ।
२०७७ असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात १४ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १३.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १९.४ प्रतिशत रहेको छ । २०७७ असार मसान्तमा यी अनुपातहरु क्रमशः १४ प्रतिशत, १४.४ प्रतिशत र १९.६ प्रतिशत रहेका थिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारसँगै वित्तीय पहुँच बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या २०७७ असार मसान्तमा ९७६५ रहेकोमा २०७७ असोज मसान्तमा ९९०३ पुगेको छ । उक्त अवधिमा प्रति बैंक शाखा जनसंख्या ३०७२ बाट घटेर ३०२९ कायम भएको छ । २०७७ असार मसान्तमा १३६२.४ रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०७७ मंसिर १८ मा २०५५.४६ पुगेको छ । त्यसैगरी, २०७७ असार मसान्तमा रु. १७९२ अर्ब ७६ करोड रहेको बजार पुँजीकरण २०७७ मंसिर १८ मा २७५५ अर्व ०६ करोड पुगेको छ ।